Injongo ye-CEPAI kukuba bonke abasebenzi bagxile kumgangatho, ukuqinisekisa ukuba iimveliso ezenziwe yi-CEPAI ngaphandle kweziphene, zama konke okusemandleni akho ukuhlangabezana neemfuno zakho
Umkhono wangaphandle weCage Chock ...
Metal ezimbini-Piece lencopho Ba ...
Iqhekeza ezimbini zakha ivalve esisigxina yebhola
Iiplanga ezimbini ezenziwe ngeValue Ball Valve eziveliswe yiECPAI ubukhulu becala zisetyenziselwa ukubhloka okanye ukudibanisa okuphakathi kumbhobho. Khetha i-Piece ezimbini ze-Ball Trunnion Ball Valve yezinto ezahlukeneyo zingasetyenziselwa amanzi, i-steam, i-oyile, i-gas ene-liquefied, i-gesi yendalo, i-gesi, i-nitric acid, i-carbamide kunye nezinye izinto.
Iziqwenga ezimbini yakha esisigxina ibhola vana
Iiplanga ezimbini ezenziwe ngeTrunnion Ball Valve eveliswe yi-CEPAI ubukhulu becala isetyenziselwa ukubhloka okanye ukudibanisa okuphakathi kumbhobho. Khetha i-Piece ezimbini eziQhelekileyo ezenziwe ngeTrunnion Ball Valve yezinto ezahlukeneyo zingasetyenziselwa amanzi, umphunga, ioyile, igesi engenamanzi, igesi yendalo, igesi, i-nitric acid, i-carbamide kunye nolunye uhlobo.
Isiqwenga ezintathu waphosa esisigxina ibhola vana
I-Valve ye-Ball Pununion I-Ball Valve eveliswe yi-CEPAI isetyenziselwa ukubhloka okanye ukuqhagamshela okuphakathi kumbhobho. Khetha i-Value Ball Ball Valve yezixhobo ezahlukeneyo ingasetyenziselwa amanzi, umphunga, ioyile, igesi, kunye negesi yendalo, igesi, i-nitric acid, i-carbamide kunye nezinye izinto eziphakathi.
Iziqwenga ezintathu zakha ivalve esisigxina yebhola
Ezintathu Piece zakha Trunnion Ball Valve eziveliswe CEPAI ubukhulu becala kusetyenziswa ukuvala okanye ukudibanisa eliphakathi kwimibhobho. Khetha Isiqwenga Esithathu Sokulinganisa I-Ball Ball Valve yezinto ezahlukeneyo zingasetyenziselwa amanzi, umphunga, ioyile, igesi engenamanzi, igesi yendalo, igesi, i-nitric acid, i-carbamide kunye nolunye uhlobo.
Isamente yentsimbi jika ivelufa yokukhangela
I-Valve ye-Swing Check Valve eveliswe yi-CEPAI ubukhulu becala isetyenziselwa ukubhloka okanye ukudibanisa okuphakathi kumbhobho. Khetha iValve Cast Swing Check Valve yezinto ezahlukeneyo inokusetyenziselwa amanzi, umphunga, ioyile, igesi etyhidiweyo, igesi yendalo, igesi, i-nitric acid, i-carbamide kunye nolunye uhlobo.
Isinyithi sokujonga intsimbi eyenziweyo
Yakha Piston Khangela Valve eveliswe CEPAI ubukhulu becala kusetyenziswa ukuvala okanye ukudibanisa eliphakathi yombhobho. Khetha iFiston Piston Check Valve yezinto ezahlukeneyo inokusetyenziselwa amanzi, umphunga, ioyile, igesi engamanzi, igesi yendalo, igesi, i-nitric acid, icarbamide kunye nolunye uhlobo.
Ukujonga kwakhona ivalve yediski
I-Valve yokujonga kabini eveliswe yi-CEPAI isetyenziselwa ukubhloka okanye ukuqhagamshela eliphakathi kumbhobho. Khetha iValve yokuHlola yezixhobo ezahlukeneyo inokusetyenziselwa amanzi, umphunga, ioyile, igesi, kunye negesi yendalo, igesi, i-nitric acid, i-carbamide kunye nolunye uhlobo.
Isamente yentsimbi yesango ivelufa
Isango Valve yi CEPAI ubukhulu becala kusetyenziswa ukuvimba okanye ukudibanisa eliphakathi kwimibhobho. Khetha iValve yeSango leMveliso yezixhobo ezahlukeneyo inokusetyenziselwa amanzi, umphunga, ioyile, igesi, kunye negesi yendalo, igesi, i-nitric acid, i-carbamide kunye nolunye uhlobo.
Yakha intsimbi valve esangweni
Kwenziwe iSango Valve eveliswe yi-CEPAI ubukhulu becala isetyenziselwa ukuvimba okanye ukuqhagamshela eliphakathi kumbhobho. Khetha i-Valve Gate Gate yezinto ezahlukeneyo zingasetyenziselwa amanzi, umphunga, ioyile, igesi, okanye igesi yendalo, igesi, i-nitric acid, i-carbamide kunye nolunye uhlobo.
Yilahla iglobhu yesinyithi
I-Valve yeCast Globe eveliswe yi-CEPAI isetyenziselwa ukubhloka okanye ukuqhagamshela umbhobho kumbhobho. Khetha iValve Globe Valve yezinto ezahlukeneyo inokusetyenziselwa amanzi, umphunga, ioyile, i-gafide, igesi yendalo, igesi, i-nitric acid, i-carbamide kunye nolunye uhlobo.
Yakha steel glove vana
IFordge Globe Valve eveliswe yi-CEPAI isetyenziselwa ukubhloka okanye ukuqhagamshela umbhobho ophakathi kumbhobho. Khetha iFordge Globe Valve yezinto ezahlukeneyo inokusetyenziselwa amanzi, umphunga, ioyile, igesi, kunye negesi yendalo, igesi, i-nitric acid, icarbamide kunye nolunye uhlobo.
I-valve yesango le-FC, eboniswe ngokusebenza okuphezulu kunye nokutywinwa kwe-bi-directional, yenzelwe kwaye yenziwa ngokobuchwephesha obuphezulu kakhulu kwihlabathi. Ngumlingani wezivalo zesango le-FC enika intsebenzo elungileyo phantsi kwenkonzo yoxinzelelo oluphezulu. Iyasebenza kwintloko ye-oyile kunye negesi, umthi weKrisimesi kunye nokuxinana kunye nokubulala ukuphindaphinda kwe-5,000Psi ukuya kwi-20,000Psi. Akukho zixhobo zikhethekileyo ziyafuneka xa kufikwa endaweni yesango levalve kunye nesihlalo.